Macdanta King Sulaymaan (qaybta 13), Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Macdanta Boqor Sulaymaan <abbr> (qaybta 13)
Waxaan ahay dagaalyahan. Waxaan rumeysanahay waxkan isha-ku-haynta. Dhabanka ayaan ka qabtay. Xushmad kuma ihi nin aan dib u dagaalamin. Haddii aad disho eeydayda, ka dib waa inaad bisaddaada u kaxeeysaa meel aamin ah. Hadalkani wuxuu noqon karaa wax lagu qoslo, laakiin isla mar ahaantaa fikirkaan uu ku guuleystey feerka hore ee Muhammad Ali waa mid ay dad badani wadaagaan. Caddaalad darradu way nagu dhacdaa oo mararka qaarkood way xanaaqdaa illaa aan weydiisanno ciqaab. Waxaan dareemaynaa in la khiyaameeyay ama aan u muuqanay in la ceebeeyay oo aan rabno inaan ka aargudano. Waxaan rabnaa in kuwa naga soo horjeedaa ay dareemaan xanuunka aan la kulanno. Waxaa laga yaabaa inaanan qorsheynin inaan ku xanuunno jirkeena cadawgayaga, laakiin hadaan xanuun ugu ridi karno maskax ahaan ama shucuur ahaan anaga oo u adeegsanna caydh yar ama aan diidno inaan lahadalno, aarsashadeena sidoo kale way macaan doontaa.
Ha odhan, Shar baan u abaalgudayaa! Rabbiga maqla, wuu ku caawin doonaa. (Maahmaahyadii 20,22). Aargudashadu jawaabtu maahan! Mararka qaar Ilaahay wuxuu noo sheegayaa inaan sameyno waxyaabo adag, miyaanay ahayn? Ha u cadhoon xanaaqa iyo aargudashada, maxaa yeelay waxaan haysannaa khasnad qaali ah - run nolosha lagu beddelo. Rabbiga sug ". Ha ku degdegin ereyadan si dhakhso leh. Ka fakar ereyadan. Maaha oo keliya fure fure u ah wax ka qabashada waxyaabaha sababa xanuunka iyo qadhaadhka iyo xanaaqa na dhex yaal, laakiin waxay udub dhexaad u yihiin xidhiidhka aan la leenahay Ilaah.
Laakiin ma rabno inaan sugnaa haba yaraatee. Da'da qaxwada-goynta, SMS iyo Twitter, waxaan rabnaa wax walba hadda iyo isla markiiba. Waan necnahay ciriiriga taraafikada, safka safka iyo waqtiyada dhaca. Dr. James Dobson wuxuu ku sifeynayaa sidan soo socota: “Waxaa jirtay waqti aadan danaynayn haddii aad gaariga seegto. Waxaad qaadatay bil kadib. Haddii ay tahay inaad sugto furitaanka albaab maalmeedka kacsan maalmahan, xanaaq ayaa kordha! "
Sugitaanka, sida Kitaabka Quduuska ah lagu qeexay, wax lug ah kuma leh ilkaga ilko cunista dukaanka weyn. Erayga Cibraaniga ah ee sugitaanku waa "qavah" oo macnaheedu yahay rajo wax uun, filasho shay oo ay ku jirto fikradda rajo-gelinta. Ilmuhu wuxuu sugayaa waalidiinta inay kacaan subaxa Kirismaska ​​oo ay u oggolaadaan inay u bandhigaan hadiyadooda muujinaya filashooyinkaan. Nasiib darrose, rajadii erayga ayaa lumisay macnaheeda maanta. Waxaan dhahnaa waxyaabo ay ka mid yihiin "Waxaan rajeyneyaa inaan shaqada heli doono" iyo "Waxaan rajeyneynaa inaysan roob daadin doonin berri." Laakiin rajada noocaas ah waa rajo la'aan. Ra'yiga kitaabiga ah ee rajadu waa rajo kalsooni leh in wax dhici doonaan. Wax ayaa la filayaa inay ku dhacaan si hubaal ah.
Qorraxdu mar kale soo kici mayso?
Sannado badan kahor waxaan maalmo yar ku dhex lugaynayay buuraha Drakensburg (Koonfur Afrika). Fiidnimadii maalintii labaad waxay ku shubtay baaldiyo markii aan helay god waxaan ku qooyay qoyaan iyo sidoo kale sanduuqii ciyaarta. Hurdada ayaa ka baxday su'aasha oo saacadihii ma dooneynin inuu dhaafo. Waan daalay, waan qaboojiyey, oo maan sugi kari in habeenku dhammaado. Miyaan ka shaki qabay in qorraxdu mar kale soo baxdo subaxda dambe? Dabcan maya! Waxaan sugayay inaan dulqaado calaamadaha ugu horreeya ee qorrax soo baxa. Markay afar ahayd aroortii ayaa durdurradii ugu horreeyay oo iftiin ah ay ka soo muuqdeen cirka isla markaana nalka maalinti furmay Shimbiraha ugu horeeya ayaa gariirey oo waxaan hubay in dhibaatadayda ay dhaqso u dhamaan doonto. Waxaan sugayay filashada in qorraxdu soo baxdo oo maalin kale ay bilaabmi doonto. Waxaan sugayay gudcurka inuu iftiinka iyo qabowga u beddelo kuleylka qorraxda (Sabuurradii 130,6) Filashada Sugitaanka Amniga Farxadda Joogtada ah. Tani waa dhab ahaan waxa sugitaanka macnaha kitaabiga ahi ku saabsan yahay. Laakiin sidee ayaad runtii u sugaysaa? Sidee Rabbiga u sugaysaa? Naftaada ka digtoonow cidda Ilaah yahay. Waad ogtahay!
Warqadda Cibraaniyada waxay ka kooban tahay qaar ka mid ah ereyada dhiiri gelinta leh ee Kitaabka Quduuska ah ee ku saabsan dabeecadda Ilaah: “Nafsaddaada ku qanac waxa ku jira, Maxaa yeelay Sayidku wuxuu yiri: "Ma doonayo inaan ku tago mana doonayo inaan ku tago" ". (Cibraaniyada 13,5). Sida laga soo xigtay khabiirada Griiga, aayaddan waxaa loo tarjumay ereyada "Weligeyna, waligey, waligey, waligey, waligey igama tegi doono." Waa yabooh aabaheena jecel! Waa sax oo way fiicantahay. Marka muxuu aayadda Maahmaahyadii 20,22 na baray? Ha aarsanin. Ilaahay sug. Iyo? Wuu idin soo furan doonaa.
Ma ogeysiisay in ciqaabta cadawga aan la xusin? Badbaadadaadu waa diiradda. Wuu badbaadin doonaa iyada. Taasi waa ballanqaad! Ilaahay ayaa daryeeli doona. Waxyaabahaas ayuu ku celin doonaa wadada saxda ah. Wuxuu ku caddeyn doonaa waqtigiisa iyo habkiisa.
Maahan wax ku saabsan ku noolaanshaha nolol aan rasmi ahayn ama sugitaanka ilaahay inuu wax walba noo sameeyo. Waa inaan si madaxbanaan u noolaano. Haddii ay tahay inaan cafinno, markaa annaguba waa inaanu cafinnaa. Marka ay tahay inaan qof kala hor tagno, waxaan la kulannaa qof. Haddii ay tahay inaan baarno oo aan isweydiino nafsadeena, markaa annagana taas waan sameynnaa. Yuusuf wuxuu ku qasbanaaday inuu sugo Rabbiga, laakiin intuu sugaayay wuxuu sameeyey wixii karaankiisa ah. Sida uu u arko xaaladda iyo shaqadiisu waxay horseedeen hor u dhac. Ilaah ma ahan wax aan sugno markaan sugno, laakiin wuxuu ka shaqeeyaa masraxa gadaashiisa si uu isugu duwo dhammaan xabbadoodii xumaa ee aan wali halkaa joogin. Kaliya markaa wuu buuxin doonaa rabitaanadeenna, damacyadeena iyo codsiyadayada.
Sugiddu waa aasaaska nolosheena Ilaah. Markii aan sugno Ilaah, waannu isku hallaynnaa, isagaan filannaa oo isaga ayaannu sugaynaa. Sugitaankeenu maahan mid aan waxtar lahayn. Waxay nafteeda ka dhigi doontaa mid muuqata, lagana yaabo inay ka duwan tahay sidii aan filaynay. Ficilladiisa ayaa aad uga sii hooseeya inta aad qiyaasi karto. Dhaawacyadaada, xanaaqaaga iyo xanaaqaaga, waxaad murugadaada ku riddaa gacanta Ilaah. Ha aarsanin. Caddaalad gacantaada ha gelinina - taasina waa shaqada Ilaah.
Macdanta Boqor Sulaymaan (Qaybta 13aad)